ငြိမ်းချမ်းအေး – ညီမလေး မမသို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
ငြိမ်းချမ်းအေး – ညီမလေး မမသို့
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅
ညီမလေး မမ ဝင်းမော်ဦး
ရင်ထဲမှာတော့ အမြဲတမ်း ကျောင်းစိမ်းလေးနဲ့
အသေရဲခဲ့သူ ညီမလေး မမ အတွက်
မိဘတွေ ‘အမျှ’ မဝေသလို
ငါဒို့လည်း ‘သာဓု’ မခေါ်ဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ကောင်းမှု အမှန်ပြုနိုင်မှ
ငါဒို့ အားရပါရ သာဓု ကျယ်ကျယ်ခေါ်မယ်
၂၇ နှစ်မကလို့ နှစ် ၂၇၀ ကြာလည်း
‘အမှန်တရား’ ဟာ အောင်ပွဲခံရမယ်
ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင် လျှောက်လှမ်းရမယ်..။
စစ်အာဏာ နှစ်ခါသိမ်း နှစ်လည်တွေ
လူထုအောင်ပန်း အမှန် ဆွတ်ခူးမယ်..။
ကျောင်းသား အာဇာနည်တွေအကြောင်း ဖော်ထုတ်ကြမယ်..။
ကောင်းမှုတွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်..။
ဂုဏ်ပြု ဦးညွတ်လိုက်ပါရဲ့…။ ။
(ကောင်းမှုတွေ အမှန် အမျှဝေနိုင်မယ့်နေ့ကို မျှော်ရည်လျက်..)
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅
(စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၈ အာဏာသိမ်း နဝတ စစ်အစိုးရရဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ် လသာ ၂ အထက်တန်း ကျောင်းသူ မဝင်းမော်ဦးအပါအဝင် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သော တော်လှန်ရဲဘော် ရဲမေအပေါင်းသို့..)
2 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – ညီမလေး မမသို့
Dawn Gwin on September 22, 2015 at 12:27 am
အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တနေ့ ၁၉ရက်နေ့ မှာကျဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့နေ့ က ကျနော်တို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ ပစ်မဲ့စစ်တပ်ကြားမှာ အလံတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တာ အထက်တန်းကျောင်းသားတွေပါ။ အတိအကျပြောရရင် ကုန်သည်လမ်း အမေရိကန်သံရုံးရှေ့ က ပစ်တာပါ။ အကိုကြီး၊ အမကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်တို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ကာကွယ်အသက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့နေ့ က ရှူခဲ့ရတဲ့ ယမ်းငွေ့ တွေကို အခုထိမမေ့သေးပါ။
nyeinchanaye81 on September 22, 2015 at 8:06 am
Yes, I have mentioned her date of death in the title photo and at the end of the poem.
ွှ့Thank you for sharing your hands-on experiences. Please do write your 1988 experiences and send to MoeMaKa.